Shiinaha Xidho Nooca U Adkeeya Soo Saarayaasha iyo Soo-saaraha | Kunda
Taarikada birta u adkaysata ayaa loola jeedaa alaabada saxanka gaarka ah ee loo adeegsado xaaladaha xirashada meelaha ballaaran. Waqtigan xaadirka ah, taarikada birta ah ee sida caadiga ah loo isticmaalo duugga ah waa taarikada ka samaysan bir bir-karbooni caadi ah ama bir-daawaha hoose oo leh adkaansho wanaagsan iyo baaxad leh iyadoo la adeegsanayo alxanka oo leh dhumuc gaar ah oo daaha lakabka u adkaysta leh oo adag oo adag iyo iska caabbinta aadka u fiican alaabta
Adkaanshaha dusha sare wuxuu gaari karaa HRc58-62
Iswiidhan HARDOX400, HARDOX450.HARDOX500. HARDOX600, SB-50, SB-45
Faransiiska FORA400. FORA500, Creusabro 4800. Creusabro8000
Jabbaan JFE-EH360 、 JFE - EH400 、 JFE - EH500 、 WEL-HARD400 、 WEL-HARD500
MN13 saxan bir ah oo u adkaysta xirashada manganiska ： Waxyaabaha manganese-ka uu ka kooban yahay 130%, oo qiyaastii 10 jeer ka badan birta caadiga u adkeysata dharka, qiimahiisuna aad ayuu u sarreeyaa.
Dhumucdiisuna Cabbirka guud: 8/10/12/14/16/18/20/25/30/40/50/60
balac 1050-2500mm Cabbirka guud: 2000 / 2200mm
Cabirka guud: 8000/10000/12000
2.Isku darka saxan duugista u adkeysata:
Waa badeecad saxan lagu sameeyay iyadoo la fiirinayo dhumuc gaar ah oo lakabka u adkeysiga u adkeysiga badan leh iyo adkeysi xirashada duugga ah ee dusha sare ee birta kaarboonka caadiga ah ama birta daawaha ah ee hooseysa oo leh adkeysi wanaagsan iyo baaxad. Lakabka kahortaga dharka guud ahaan wuxuu xisaabiyaa 1 / 3-1 / 2 ee wadarta dhumucda.
l Lakabka xirashada u adkaysta badanaa waxaa laga sameeyaa aaladda loo yaqaan 'chromium alloy', iyo waxyaabo kale oo isku darsamay sida manganese, molybdenum, niobium, iyo nickel ayaa sidoo kale lagu daray.
Fasalka : 3 + 3、4 + 2、5 + 3、5 + 4、6 + 4、6 + 5、6 + 6、8 + 4、8 + 5、8 + 6、10 + 5、10 + 6、10 + 8、10 + 10、20 + 20
3. Adeegyada la heli karo
Taarikada u adkeysata waxay bixin kartaa habab farsameyn ah: qaybo kala duwan oo goynta bir ah, CNC goynta kuraasta dhalista, silsiladaha mashiinka CNC, qaybaha qaansada, qaybaha gundhigga, qaybaha qaababka gaarka ah leh, qaybaha muuqaalka, qaybaha, laba jibbaarada, xariijimaha iyo farsamooyinka kale ee garaafyada.
4.Codsiga saxanka xiran
1) Warshadda korontada ee kuleylka: Xawaaraha dhexdhexaadka ah ee dhuxusha dhuxusha, soodhaweynta mashiinka kiciyaha, qiiqa tubada soo ururinta boodhka, marinka ash, sanduuqa marawaxadaha baaldiga, kalasooca isku xiraha, mashiinka dhuxul dhagaxda, dhuxusha dhuxusha iyo mashiinka mashiinka wax lagu jajabiyo, gubiyaha gubi, dhuxusha hopper iyo mashiinka safka, dusha kahortaga hawo kululaynta hawada, qalabka hagaha kala-goynta. Qaybaha kor ku xusan ma laha shuruudo sare oo ku saabsan adkaanta iyo xirashada iska caabbinta saxanka birta u adkeysanaya, iyo saxanka birta u adkeysanaya ee dhumucdiisu tahay 6-10mm ee maadada NM360 / 400 waa la isticmaali karaa.
2) Daarada dhuxusha: quudinta weelka iyo dahaarka hopper, dahaarka hop, marawaxadaha, saxanka hoose ee riixa, aruuriyaha boodhka duufaanka, saxanka dahaarka hagaha coke, dahaarka miiska kubbadda, xasiliyaha daloolinta, kala garaaca dawanka quudiyaha iyo salka Saldhiga, dahaarka gudaha ee baaldiga cajiinka, giraanta giraanta, taarikada hoose ee xamuulka qashinka. Jawiga shaqada ee ardaaga dhuxusha waa mid qallafsan, waxaana jira shuruudo gaar ah oo loogu talagalay iska caabinta daxalka iyo xirashada caabbinta saxanka birta u adkeysanaya. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho saxanka birta u adkeysanaya ee NM400 / 450 HARDOX400 oo dhumucdiisuna tahay 8-26mm.
3) Warshada sibidhka: dahaarka cufan, duurka dhammaadka, aruuriyaha boodhka duufaanka, daab kala sooca budada iyo daabka hagaha, daab faneedka iyo dahaadhka, dib u warshadaynta dahaarka baaldiga, fur saxanka xamuulka hoose, isku xirka dhuumaha, mashiinka saxanka qaboojiyaha. Qaybahani waxay sidoo kale u baahan yihiin taarikada birta u adkeysata ee leh adkeysiga ugu wanaagsan ee u adkeysiga iyo u adkeysiga daxalka, iyo taarikada birta u adkeysata ee ka samaysan NM360 / 400 HARDOX400 oo dhumucdiisuna tahay 8-30mmd ayaa la isticmaali karaa.
4) Mashiinada rarida: dejinta taarikada silsiladaha silsiladaha, safafka hopper-ka, garbaha qabashada, gawaarida otomaatiga ah ee otomatiga ah, meydadka gawaarida qashinka. Tani waxay u baahan tahay taarikada birta ah ee u adkeysata dharka leh iska caabbinta aadka u sarreeya iyo adkaanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho taarikada birta ah ee u adkeysata dharka oo leh maadada NM500 HARDOX450 / 500 iyo dhumucdiisuna tahay 25-45MM.
5) Mashiinnada macdanta: Dahaarka, garbaha, maraakiibta xambaara iyo baalayaasha macdanta iyo dhagxaanta. Qaybaha noocan oo kale ah waxay u baahan yihiin iska caabin xirasho oo aad u saraysa, qalabka la heli karana waa NM450 / 500 HARDOX450 / 500 oo ah taarikada birta u adkeysata ee dhumucdoodu tahay 10-30mm.
6) Mashiinnada dhismaha: saxanka riixidda saxanka ilkaha, munaarad isku-darka shubka, saxanka dahaarka mashiinka, saxanka dahaadhka ururiyaha boodhka, saxanka caaryada mashiinka lebenka ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho taarikada birta u adkeysata ee ka samaysan NM360 / 400 oo dhumucdiisuna tahay 10-30mm.
7) Mashiinnada dhismaha: kuwa wax rarta, cagaf-cagafyada, taarikada baaldirada wax lagu qodayo, taarikada baalka dhinaceeda, taarikada hoose ee baaldiga, garbaha, ulaha qodista Rotary. Mashiinnada noocan ahi waxay u baahan yihiin saxan bir ah oo si gaar ah u xoog badan oo lebbis u adkaysta lehna iska caabin abrasion ah oo aad u sarreeya. Qalabka la heli karo waa NM500 HARDOX500 / 550/600 oo dhumucdiisuna tahay 20-60mm.
8) Mashiinnada qadiimiga ah: Mashiinka qashinka birta ah, gudbinta xusulka, mashiinka mashiinka macdanta birta, safka xoqidda. Sababtoo ah mashiinada noocan ah waxay u baahan yihiin heerkul sare oo u adkaysta iyo taarikada birta u adkeysata ee aadka u adag. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho taxanaha HARDOX600HARDOXHiTuf ee taarikada birta u adkaysta.
9) Taarikada birta u adkaysata waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dhululubbada ciida, garbaha, yaardka xamuulka ee kala duwan, mashiinada terminalka iyo qaybo kale, qaababka dhalista, dhismooyinka gawaarida tareenka, duub, iwm.
Xidho saxan u adkaysta, xira saxan, xidho saxan bir ah
Xidho saxanka birta u adkaysta waxaa loola jeedaa alaabada saxanka gaarka ah kuwaas oo loo isticmaalo xirashada aagga ballaadhan ee xarkaha leh. Waa la goyn karaa, foorarnaan karaa, la alxan karaa, iwm. Wuu ku xidhi karaa qaabdhismeedyada kale ee alxanka, dhejiska alxanka iyo isku xidhka balka, Waxay leedahay astaamaha waqtiga-badbaadinta oo ku habboon geedi socodka dayactirka.
Hadda si ballaaran ayaa loogu isticmaalay metallurgy, dhuxusha, sibidhka, korontada, galaaska, macdanta, qalabka dhismaha, lebenka iyo warshadaha kale. Marka la barbardhigo agabyada kale, waa mid qiimo jaban wax ku ool ah oo ay u xagliyeen warshado iyo soosaarayaal aad iyo aad u tiro badan.
Dhumucdiisuna 3-120mm Width: 1000-4200mm Dhererka: 3000-12000mm
Shaxda Is-barbardhiga ee Xir-iska caabinta
Hore: Cimilada U Adkaysata Cimilada
Xiga: Saxanka Birta Kaarboon